भुइँतलामा गलैँचा ओछ्याएर यस्तो गर्दै गर्दा रं’गेहात ७ जना प’क्राउ ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/भुइँतलामा गलैँचा ओछ्याएर यस्तो गर्दै गर्दा रं’गेहात ७ जना प’क्राउ !
भुइँतलामा गलैँचा ओछ्याएर यस्तो गर्दै गर्दा रं’गेहात ७ जना प’क्राउ !
काठमाडौं । बन्दाबन्दीको बेला जुवा खेल्ने झापाको कनकाई नगरपालिकाका सात युवा रु ७१ हजार नगदसहित प’क्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक राकेश थापाका अनुसार कनकाई नगरपालिका–३ टप्पु टोलस्थित चेतनकुमार प्रसाईँको घरको भुइँतलामा गलैँचा ओछ्याएर जु’वा खेलिरहेका बेला प्रहरीको टोलीले शनिबार दिउँसो ती युवालाई प’क्राउ गरेको हो ।
प’क्राउ पर्नेमा कनकाई–३ का विष्णुप्रसाद उप्रेती, लिलु अग्रवाल, सुरज चुडाल, हरि खरेल र ओमप्रकाश चापागाईँ छन् भने कनकाई–४ का मानबहादुर श्रेष्ठ र हरिबहादुर श्रेष्ठ रहेका छन् । प्रहरीले जु’वाको खा’लबाट सो नगद, क्यान्डिड पाउडर र एक थान गलैँचा ब’रामद गरेको जनाएको छ । प’क्राउ परेकालाई अनुसन्धान गरी का’रवाहीका लागि अनारमनी इलाका प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ ।
सलमान खानको हत्याको योजना बनाउने व्यक्ति पक्राउ
अनिशाको साथी पहिलोपटक मिडियामा, २० दिनपछि कन्चनको आमा घरपुग्दा गाउँमा यसरी भए जम्मा (हेर्नुस् भिडियो)
आर्कषक तलब ! मलेशियामा भारी संख्यामा नेपाली कामदारको माग !